“डिग्रीले मात्र पत्रकारिता नसुध्रने रहेछ” (आमसञ्चार विज्ञ रामकृष्ण रेग्मीसँग कुराकानी)
अन्तर्वार्ता/विचारआइतवार, भाद्र ५, २०७३
पत्रकार बन्न चाहनेले सरकारको परीक्षा उत्तीर्ण गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने चर्चा सुन्दा कस्तो लागिरहेको छ ?
पत्रकार बन्न चाहनेका लागि परीक्षा लिने कुरा अत्यन्त गाह्रो विषय हो । व्यावहारिक रुपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न झनै कठिन छ ।
परीक्षा लिन कसरी अप्ठेरो हुन्छ र ?
परीक्षा कसले लिने ? कुन–कुन विषयको लिने ? मापदण्ड के हुने ? यो नै स्पष्ट छैन । पत्रकारिता अरु जस्तो होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हो । त्यसलाई कसरी जाँच्ने ? त्यसैले धेरै कठिनाइ छन् ।
पत्रकारितालाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन परीक्षा आवश्यक छ भन्ने तर्क कत्तिको सही छ ?
यस्तो लक्ष्य राखिनु राम्रो कुरा हो । तर, मार्ग सही भएन भने भनेको गन्तव्यमा पुगिंदैन । परीक्षाले नै पत्रकारिता मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? विभिन्न क्याम्पसहरूमा पत्रकारिता अध्ययन हुन्छ, परीक्षा हुन्छन्, पत्रकारितामै पीएचडी र डिग्री गरेकाको जमात पनि ठूलो भइसक्यो । के पत्रकारिता अपेक्षाकृत सुध्रिएको, मर्यादित भइरहेको छ त ? स्पष्ट छ– छैन ।
चिकित्सा, वकालतजस्तो पेशामा अनुमतिपत्र चाहिने तर पत्रकारितामा चाहिं किन नचाहिने भन्ने पनि सुनिएको छ ।
पत्रकारिता सीप हो, व्यवसाय मात्र होइन । पत्रकारिताको सम्बन्ध अरु थुप्रै विषयसँग जोडिन्छ । व्यक्तिको सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लड्ने पत्रकारलाई कुनै विषयमा लेख, नलेख भन्नै मिल्दैन । अहिले पनि हामी म्यागाजिन र दैनिक पत्रिकामा एकखाले गुणस्तरीयता देख्छौं । यो गुणस्तरीयता परीक्षाले होइन, प्रतिस्पर्धाबाट मात्र सम्भव भएको हो ।
त्यसो भए पत्रकारितालाई कसरी मर्यादित बनाउने त ?
मुख्य कुरा त आचारसंहिता कार्यान्वयनमा जोड नै हो । त्यसमा बहस चलाउनुपर्छ । परीक्षाले मात्र केही हुन्न । पत्रकारिता विषयमै विभिन्न परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू पत्रकारितामै असफल भएका प्रशस्त घटना पनि त छन् ।